Akasalanga uKatlego iGomora ihloma ngosaziwayo - Bayede News
Basuke beqinisile uma bethi ukuvaleka komnyango kusho ukuvuleka komunye. Kungakapheli isikhathi eside ephelelwe itoho kusoapie ebidlala kuSABC 3 Isidingo, umlingisi uKatlego Danke usezovumbuka ochungachungeni lomdlalo weMzansi Magic, iGomora-Ivili Liya Jika. Ababukeli beSidingo bagcine ukusibuka okokugcina maphakathi nesonto. UKatlego (42) ubelingisa indawo kaKgothalo. ISABC izeseke ngokuthi ichitha Isidingo ngoba siyehluleka ukuheha ababukeli nabakhangisi. KuGomora, ezoqala ukubukwa mhla zingama-30 kwephezulu, uKatlego uzolingisa indawo ephambili enguThathi, ozovezwa njengenkosazane ephila ntofontofo. Le ndawo icishe ifane naleyo ayeyidlala enguDineo Dlomo kuGenerations ethandana noKenneth Mashaba okunguSeputla Sebogodi.
Washiya ngowezi-2014 nozakwabo abali-16 bekhala ngemiholo phakathi kwezinto eziningi. UKatlego akakufihlanga ukuthi ‘kuthi akandize’ ngokuthola lo msebenzi nakhu phela usezoqhubeka nokuthenga iphalishi kondleke nomndeni wakhe. “Ngizizwa ngithobekile ngokuthi ngizoba ingxenye yalo mdlalo omusha. Kuyintokozo ukuhlangana nokusebenzisana nethimba labalingisi nabadidiyeli bezinga eliphezulu. Kimina lokhu kufana nohambo olusha. Abantu bazobona into yamehlo,” uphefumule kanje lo mlingisi ozalwa eNorth West. Ngaphambi kokugqama kuGenerations kaMfundi Vundla, uKatlego waqala ukukhombisa ikhono elingisa indawo kaKeketso kuBackstage eyayikhonjiswa ku-etv ngowezi-2002. Wafika kwezwakala kuGenerations njengoba wahlabana ngendondo yokuba umlingisi ovelele kumaSA Film and Television Awards. Lokho kunqoba kwamvulela amasango njengoba igama lakhe lavela ebhukwini iFHM njengomunye kubantu besifazane abali-100 emhlabeni ababalwa nabahle kakhulu maphakathi nowezi-2006 nowezi-2011.
IDurban Art Gallery yindawo enomehluko ongayihambela
Ngowezi-2010 waqokwa yiphephabhuku iYou emnxeni iSpectacular Award koweFavourite Actress. Waphinde waqokwa emnxeni iBest Screen Villain kuDuku-Duku 2004 Awards nasemnxeni iBest Dressed Actress ku-SAFTVA ezi-2009. Ukhombise ukudlondlobala namakhono amaningi njengoba ebuye wathola itoho lokusakaza kuMetro FM edudula uhlelo olwalungena ezintatha. Kwake kwaba khona uvalo kubalandeli bakhe ngesikhathi egwazwa ngumuntu ongaziwa esiphongweni endaweni yokupaka e-Auckland Park ngowezi-2007. Wayeqeda kushayisa esegoduka . Elinye ikhono lakhe ligqame ngesikhathi ecelwa ukungakhingiselwa izinkampani ezinjengoVanish, Clover noHonda. Ngaphandle kokuhloma ngeziqu zokulingisa zeBachelor of Arts egxile kuTheatre and Performance azithola e-University of Cape Town ngowezi-2001, ugabe nge-Diploma yeManagement Studies ayizuze eWits Business School ngowezi-2010. Waqala ukubonakala emidlalweni eminingi yeshashalazi ngaphambi kokuzakhela ugazi kubathandi bakamabonwakude.
Ngesikhathi kusacwebe iziziba ngetoho lokulingisa, uke waba umethuli wohlelo lweLotto lapho kukhishwa izinombolo eziwinile. Abadidiyeli beGomora babukeka befuna ukuthi uhehe njengoba belande abalingisi abanohlonze abanjengoConnie Chiume, uThemba Ndaba, uThembi Seete noZolisa Xaluva. Elinye lamalokishi amadala aseGoli i-Alexandra ibizwa ngeGomora, okuyilapho lo mdlalo omusha ozodweba sigqame isithombe ngempilo yokwentula nokuphila ntofontofo kubantu. UNomsa Philiso, oyiChannel Director wakwaMzansi Magic, uthe. “Ababukeli bethu bazobhema bakholwe ngalo mdlalo odidiyelwe ngobuchule futhi ogabe ngabalingisi abanekhono lokukuthatha bakubeke.”